Guul lagu guuleysto dhaqaalaha tamarta tamarta nadiifka ah waxay la socotaa faa'iidooyinka dhaqaale ee mustaqbalka ee xirfadaha khibradda leh ee aadka u wanaagsan.
Toddobaadkii hore, Guddoomiyaha Dayton wuxuu sameeyey laba ogeysiis muhiim ah oo la xiriira shaqooyinka dhaqaalaha tamarta nadiifka ah. Marka hore: mashruuc qorrax leh oo 25 milyan oo doolar ah oo la dhisi doono ayaa lagu dhisi doonaa laba dusha sare ee gawaarida ee Garoonka Caalamiga ah ee Garoonka Caalamiga ah ee Minneapolis St. Mashruuca tamarta qorraxda ayaa noqon doona Minnesota ugu weyn waxana uu dhalin doonaa 20% oo ah korantada guud ee maddaarka. Waxaa macquul ah, sidoo kale waxay abuuri doontaa 250 shaqooyin cusub.
War-saxaafadeedka labaad ee Guddoomiye-goboleedka ayaa ahaa sii-deynta cusub Qeybta Dhaqaalaha ee Minnesota Energy Energy, dadaalka ugu ballaadhan ee la doonayo in lagu soo bandhigo ganacsiga, shaqada, mushaharka, iyo maalgelinta ku lug leh dhaqaalaha tamarta nadiifka ah ee gobolka. McKnight wuxuu taageersanaa horumarka warbixinta laba barnaamijyada aasaasiga ah ee xiisaha leh ee kor u qaadaya dhaqaalaha tamarta nadiifka ah - noo Barnaamijka Cilmi-baarista iyo Cimilada ee Midwest ayaa diiradda saaraya sidii loo caawin lahaa Midwest si wax looga qabto isbeddelka cimilada iyada oo hoos loo dhigo hoos u dhigista qiiqa kuleylka dhammaan qaybaha dhaqaalaha, halkaan Barnaamijka gobolka iyo beelaha wuxuu ka shaqeeyaa sidii loo kordhin lahaa horumarka magaalooyinka waaweyn iyo horumarinta magaalooyinka nool iyo fursado ay qof walba ku koraan.
Qaar ka mid ah warbixinnada muhiimka ah ee warbixinta:
Laga bilaabo rubuca hore ee 2014, Minnesota waxay shaqaaleysiisay in ka badan 15,300 oo shaqaale ah oo ku shaqeeya tamarta tamarta, bioenergy, dabaysha, qorraxda, iyo shabakada smart;
Laga soo bilaabo 2000 ilaa 2014, shaqooyinka tamarta nadiifka ah ee gobolka ayaa kor u kacay 78%, marka la barbar dhigo kobaca shaqooyinka 11% oo keliya guud ahaan isla muddadaas;
Mushaharka sanadka ee celceliska shaqooyinka tamarta nadiifka ahi waa $ 61,500 ilaa $ 80,300, qiyaastii 42% ka sarreeya mushaharka celcelis ahaan gobolka Minnesota.
Xiriirada la xiriira
Xogta Dhaqaalaha ee Tamarta Minnesota, warbixin buuxa Barnaamijka McKnight ee barnaamijka Midwest Climate & Energy Barnaamijka 'McKnight' ee barnaamijka 'Regional & Communities'